शैक्षिक संस्था खाेल्ने तयारीमा सरकार, कहिलेदेखि हुन्छ सुरू ? — sancharkendra.com
शैक्षिक संस्था खाेल्ने तयारीमा सरकार, कहिलेदेखि हुन्छ सुरू ?
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याकंन परिषद्को बैठकले सो ढाँचा स्वीकृत गरेको हो । हाल विद्यालय तहमा ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले आगामी सात महिनाभित्रै यो वर्षको पठनपाठन पूरा हुने बताए । उनले संश्लेषित पाठ्यक्रमका आधारमा अब बाँकी रहेको सात महिनाभित्र नै शैक्षिक सत्र पूरा हुने बताए ।
गत १९ भदौमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले कोभिड–१९ का कारण विद्यार्थीको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । संश्लेषित पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले आफैं पढेर नबुझेका कुरा शिक्षकलाई सोध्न सक्ने तथा घरैमा पढेर अभिभावकको सहयोगमा पनि हल गर्न सक्ने योजना बनाइएको छ ।
उनले विद्यार्थीको सिकाइको मूल्यांकन प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने मान्यताको ढाँचा निर्माण भएको बताए । पाठ्यवस्तु समायोजनका लागि एकीकरण, समूहीकरण र प्राथमिकीकरण सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ ।